Sarimihetsika mahatsiravina tsara indrindra hijerena - Oktobra 2020 (Nohavaozina) - Fialam-Boly
Sarimihetsika mahatsiravina tsara indrindra hijerena - Aza mijery irery
Ny sarimihetsika sanganasa mampatahotra amin'ny fotoana rehetra dia tsy azo vinavinaina velively. Tsy fantatrao mihitsy hoe rahoviana no ho tonga ny tahotra farany, ary izay voalaza, ny sarimihetsika mampihoron-koditra dia tsy misy jumpscares. Aleo kosa mitandrina ny tsiambaratelo.Raha mangetaheta ilay haizina mandady ianao izay tsy mikasika ny jiro mihitsy. Raha te hiaina izany fahatsapana mampihoron-koditra izany ianao dia eo amin'ny toerana mety. Noho izany, andao hanana toerana kely ary hamaky azy tsara.
Etsy ambany isika manana fanangonana azo ovaina ny sarimihetsika mampihoron-koditra tsara indrindra hijerena amin'ny taona 2020. Tokony holazaina fa ireo sarimihetsika ireo dia fifangaroan'ny scars vaovao sy taloha. Noho izany, ndao hipetraka isika, vonoy ny jiro, ary miomàna hanao fitsangantsanganana mahatsiravina.
Sarimihetsika mahatsiravina tsara indrindra hijerena amin'ny taona 2020:
Manomboka amin'ny mpikapoka ka hatrany amin'ny biby goavam-be sy hotely manenjika dia ireto misy ny sarimihetsika mahatsiravina tsara indrindra hijerena amin'ny taona 2020.
Shining 1980 dia iray amin'ireo sarimihetsika mampatahotra indrindra hijerena. Ny zava-bitan'i Jack Nicholson tsy nisy fiatraikany rehefa nilentika tamina hadalana feno famonoana olona tamin'ny lalana tsy misy fitsaharany Kubrick izy rehefa manaraka tamim-pihatsarambelatsihy an'i Danny teo am-pitetezana ireo lalantsara fandraisam-bahiny teo amin'ny trikeony. Tsy mamela anao hipetraka eo ambonin'ny seza mihitsy ilay sarimihetsika.
Toy ny hoe tapa-kevitra ny lehilahy adala mamo. Fa ny manaraka dia mampatahotra. Ankizivavy kely voatetika, mampiakatra ny rà, ary ny fampihorohoroana mandady ao amin'ny trano fidiovana 237, ity no ho hitanao manaraka amin'ny sarimihetsika.
Misoratra anarana amin'ny fitsarana maimaim-poana ao amin'ny Netflix
Eny, rariny izany raha tsy misy faharoa amin'ny sarimihetsika izay ahafahanao milaza fa tsy mampatahotra anao. Ny tantara mampihoron-koditra dia takona afenina ao ambanin'ny fianakaviana falifaly lavorary — Ari Aster's tamin'ny voalohany notarihin'i Toni Collette mikorontana. Ahitana renim-pianakaviana malahelo ny sary mihetsika - ny fahafatesan'izy ireo nandefa onjampeo nanerana ny tranon'izy ireo.
Mandritra ny adiny roa amin'ny sarimihetsika dia tsy mahatsapa ianao mandritra ny fotoana azonao atao ny mijanona sy misento kely. Ny sary rehetra ataon'ny mpanakanto an'i Collette amin'ny sarimihetsika dia mamorona cyclorama kely izay mahatsapa ho toy ny fandrahonana, ary ny resaka maditra rehetra eo amin'ny tanora ao amin'ny fianakaviana dia manaitra anao vetivety.
Misoratra anarana amin'ny Fitsarana maimaim-poana amin'ny horonantsary
Host ny taona 2020 ny sarimihetsika mahatsiravina indrindra nefa mbola jerena amin'ny vanim-potoana atokana. Miorina amin'ny fanafihana goavambe an'i Romero amin'ilay mpanjifa, ny nofinofy amerikana dia manara-maso ireo efatra tafavoaka velona tamin'ny loza Zombie rehefa tonga tao amin'ny magazay mpivarotra izy ireo.
Eny, afaka miresaka moramora momba ny fifandraisana amin'ny sarimihetsika isika, ary azo ifandraisany tokoa izany. Ny teknolojia sy ny fanavaozana maoderina sasany dia mamorona sarimihetsika mampatahotra indrindra tokony ho jerena amin'ny taona 2020. Izany no azon'ny talen'ny hazakazaka Rob savage amin'ity vanim-potoana fanidiana ity. Mahaliana izany ny mijery ny fomba ahatafitana velona amin'izy ireo amin'ny fanafihana Zombies.
Fisoratana anarana ho an'ny fihenan'ny mpianatra Netflix
Ilay sarimihetsika zavatra dia mijanona ho iray amin'ireo horohoro ampolony indrindra ary fandatsahana be voninahitra amin'ny fotoana rehetra. Ny vondrona amerikana ao amin'ny tobim-pikarohana any Antarctica dia mandray vahiny iray. Eny, ireo zavatra mamindra amin'ny ra. Ny tena mampatahotra amin'ilay sarimihetsika dia ny famoronana paranoia mahery sy horohoro sombiny amin'ny ampahany hanaparitahana ilay aretina.
Nefa hatreto, ny ezaka azo ampiharina sy ny andraikitr'ilay tanora Rob Bottin sy i Stan Winston tsy nahazo mari-pahaizana dia ireo kintana marina voaongotra, ny lohany mitsimoka tongotra, ary mivelatra ny vatana. Ny fahitana ny sarimihetsika sy ny biby goavam-be mpamono olona dia tsy latsa-danja noho ny tena nofy ratsy.
Fisoratana anarana ho an'ny fihenan'ny mpianatra Disney Plus
Ny Exorcist dia mitovy amin'ny sarimihetsika mamirapiratra, ary izany no mahatratrarana ny laharana fahadimy ao amin'ny lisitray. Tsy azo vinavinaina sy mampatahotra tokoa ilay sarimihetsika satria ao anatin'izany ny tantaran'i Regan, zanakavavin'ny mpilalao sarimihetsika mahomby, izay indray andro niafina tao ambany rihana rehefa nilalao tamin'ny birao Ouija. Na izany aza, te-hanao zavatra miavaka amin'ny solaitrabe ilay zazavavy.
Avereno ny tantara mahatsiravina rehefa tonga ilay sarimihetsika mpanala demonia. Na dia mifototra amin'ny toerana tsotra indrindra aza ilay sarimihetsika, dia ao koa ny fampidirana tebiteby izay tsy mamela anao hipetraka ambony seza fotsiny.Ireo mpilalao dia nivaingana tao anaty vata fampangatsiahana tao anaty efitrano fandrian'ny efitra fatoriana, nitaona ara-batana ireo andiany izy ireo mba hamerenana ilay fahaizan'ny vatana. Mampatahotra tokoa ilay sarimihetsika ary tsy maintsy jerena amin'ny quarantine.
Ny sarimihetsika dia mitovy amin'ny tsorakazo sy slash. Halloween dia mametraka fanamarihana mahazatra momba ilay sarimihetsika mampihoron-koditra tsara indrindra izay tsy hifanaraka velively. Ny mpandrafitra dia nanoratra ny fitifirany izay mamela anao haminavina, hampiharihary tahotra, ary afangaro amin'ny claustrophobia.
Ny feon-kira tsy milamina sy ny fahatsapana fa marefo ny zava-mitranga amin'ny sarimihetsika dia mamela anao hiantsoantso kely. Izany no antony mbola mampijaly mampijaly foana ny famotehana ny famoizam-poizina.
Talohan'ny nahatongavan'i Et sy ireo horonantsary nikiakiaka hafa dia nisy sarimihetsika Jaw, noforonin'ny sarimihetsika mahatsiravina toothy Steven Spielberg. Manenjika anao lava kokoa ity sarimihetsika ity satria ny antsantsa antsantsa mpamaly faty dia manimba ny dian'ny tsirairay mankany amoron-dranomasina.
Ity fitsangatsanganana feno sy mampatahotra ity amin'ny onjan-dranomasina sy ny antsantsa mandany dia mitazona anao ho mailo amin'ny fotoana rehetra. Maty ny ankizy, maty ilay alika, ary mitsingevana eo ambonin'ireo sambokely rendrika. Ampy izay ny milaza momba an'ity sarimihetsika ity sy ny fampihorohoroana tsapanao rehefa mijery ilay sarimihetsika ianao.
Alien dia sarimihetsika foronina siansa izay natao ho an'ilay horonantsary mampatahotra lehibe indrindra. Tany am-boalohany ny antso fihenjanana avy amin'ny sambon-danitra, ny biby goavambe mampatahotra. Nandefa ny ekipan'ny Nostromo azy i Scott hanadihady izany. Ny tahotra dia lasa lalindalina kokoa araka ny eritreritrao, ary ny zavaboary dia namorona ny multilayers tsy hita noanoa ny horohoro psychosexual.
Ary koa, ny manjavozavo hita maso ny fitarihan'ny Scotts mandritra ny hetsika farany dia ny fihenjanana mihenjana. Raha te-hahatsapa ny tena horonantsary mampihoron-koditra ianao dia tsy maintsy mandeha amin'izany.
Tamin'ny faramparan'ny taona 90 no tonga ilay sarimihetsika mahatsiravina. Ilay trope slasher dia nampikorontana ny filany kaopy espresso mahery. Fa ny azony dia ny kiakiakan'ny Wes Cravens. Ny saron-tava dia miorina amin'ny sary hoso-doko izay mety hivadika ho any amin'ny fahasambaran'ilay vato.
Mbola tsy azo vinavinaina ihany ny kiakiaka, ary notapahin'ireo niharam-boina hatrany ilay antsy famonoana. Ny lalao farany dia manahirana tokoa ary manontany tena hatramin'ny farany, iza no ho tafavoaka velona.
Inona no fantatrao momba ny Drag Race Season 13?
Coin Hunt World Metaverse: Mihaza Bitcoins manerana izao tontolo izao!
www, netflix, com
sarimihetsika maimaim-poana azonao jerena amin'ny Internet
tsy misy lalao tsy misy fiainana dub kissanime
sarimihetsika maimaim-poana mijery an-tserasera sarimihetsika feno maimaim-poana
sarimihetsika vaovao maimaim-poana amin'ny Internet hijerena tsy misintona